ဒေါက်တာမြင့်သိန်း (ငြိမ်းချမ်းလုလင်): “အယောင်ဆောင်ဒီမိုကရက်များ” | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မောင်သော်ကကိုထောင် အနှစ်(၂၀) ကျစေခဲ့တဲ့ တပ်မတော်ရေသို့ ပေးစာ (၁)စောင်
ကရင်၏ မူလ ဇာစ်မြစ် »
ဒေါက်တာမြင့်သိန်း (ငြိမ်းချမ်းလုလင်): “အယောင်ဆောင်ဒီမိုကရက်များ”
ဒေါက်တာမြင့်သိန်း (ငြိမ်းချမ်းလုလင်) ပြောကြားတဲ့ “လူသားတန်ဖိုးလေးစားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ ပညာရေး၊ မီဒီယာ၊ သုတေသီတို့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဌ”
ကမ္ဘာ့ဘာသာတရား အသီးသီးကလည်း လူ့ဘဝကို တန်ဖိုးထားပြီး စာနာထောက်ထားဘို့၊ အယူမှန် + အကျင့်မှန်ဘို့ သွန်သင်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာသာတရားအသီးသီးရဲ့ ဘာသာဝင်တွေထဲမှာ အယောင်ဆောင်တွေရှိသလို ဒီမိုကရေစီ အခြေပြု လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်း အယောင်ဆောင် ဒီမိုကရက်တွေ ရှိနေကြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ရပ်ရပ်ကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရတဲ့ အခါမှာ မိမိရဲ့အစွဲတွေကို မစွန့်လွှတ်နိုင်တဲ့အတွက် ဒီမိုကရေစီရဲ့ အခြေခံ မူဝါဒတွေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေခံစံနှုန်းတွေကို လက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိကြဘဲ ဒီမိုကရက် မျက်နှာဖုံးတွေ ကွာကျကုန်တာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ကမ္ဘာရွာကြီးမှာ ဘာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာဘာသာ ကိုးကွယ်ကိုးကွယ်၊ လူသားတန်ဖိုး (Humanity) နဲ့ မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်ခြင်း (Identity) တွေဟာ လူ့ဘဝအဓိပ္ပါယ်ရှိမှုကို ပြတဲ့အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ လူသားတစ်ဦးရဲ့ မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်ခြင်း (Identity)ကို ပျက်စေခြင်းဟာ လူ့ဘဝပျက်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ – ကျောင်းသားတစ်ယောက်အတွက် စာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးမှု၊ လူမမာတစ်ဦးအတွက် ဆေးဝါးကုသမှုဆုံးရှုံးမှု စတာတွေဟာ လူသားတွေကို ဘဝပျက်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဥပဒေအထက်မှာ ဘယ်သူမှမရှိစေရဘူးလို့ ဟစ်ကြွေးနေကြပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ အယူသီးမှု၊ အစွန်းရောက်မှုတွေကြောင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို ဥပဒေအထက် ပို့လိုတဲ့အတွက် အရှိတရားကို လက်ခံဖို့နဲ့ ဥပဒေအရ သူတစ်ပါးရဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေပေးဖို့တွေကို လက်မခံနိုင် ဖြစ်နေတာတွေလည်း တွေ့ရပါတယ်။
သူတို့တွေဟာ တစ်ချိန်တည်းမှာ သက်ဆိုင်ရာဘာသာတရားရဲ့ သွန်သင်ချက်တွေကို ငြင်းပယ်ရာ ရောက်သွားလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ လူသားတန်ဖိုးလေးစားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပျောက်ဆုံးနေလေ့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်နေတာကိုပဲ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းလို့လည်း လွဲမှားစွာ မှတ်ယူလေ့ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ လက်တွေ့မှာတော့ သူတို့ဟာ မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာတရားတွေကို လက်တွေ့မှန်ကန်စွာ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်တာလည်းတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကိုယ်နဲ့အမျိုးမတူသူ၊ အယူမတူသူ တွေကို ဆန့်ကျင်လိုစိတ်ပေါက်ဖွားလာပြီး လူသားတန်ဖိုးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယဉ်တွဲနေထိုင်ရေး ကို လက်ခံနိုင်စွမ်း မရှိတဲ့အဖြစ်ကို ရောက်သွားလေ့ရှိပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ UNESCO က ဒီနေ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ လူမျိုးအားလုံးဟာ လူသားမျိုးရိုး တစ်ခုတည်းက ဆင်းသက်လာပြီး ဒီနေ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မျိုးသန့် (Pure Race) ဆိုတာ မရှိတော့ဘဲ လူမျိုးတိုင်းဟာ ကပြား (Mixed Blood) လို့ ကြေညာပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
လူမျိုးရေး အစွန်းရောက်လို့ ဖက်ဆစ်၊ နာဇီနဲ့ ဇီယွန်ဝါဒတွေကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်မှာ သွေးချောင်းစီးခဲ့ပြီးပါပြီ။
စီးပွါးရေးမှာလည်း လူမျိုးတူအချင်းချင်းပဲ ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ မျက်ကန်းမျိုးချစ်စိတ်ကြောင့် တံခါးပိတ်စီးပွါးရေး စနစ်ပေါ်လာပြီး မြန်မာပြည်ဆိုရင် ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံး (LDC) စာရင်းထဲ ပါသွားပါတယ်။
ဥပဒေ အရ နိုင်ငံသားဟုတ်/မဟုတ် ခွဲခြားရမယ့်အစား
ရုပ်ရည်သွင်ပြင်နဲ့ ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကိုကြည့်ပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံ ခံခဲ့ရပါတယ်။
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို “သွေးနှော” ဆိုပြီး ဥပဒေမဲ့ ဆက်ဆံခံ ခဲ့ရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဉ်မှာ ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အသေချာဆုံး ကြိုးပမ်းမှုဟာ ပညာရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲက မတူကွဲပြားခြားနားမှုတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား တတ်ဖို့၊ သဘောထားကြီးဖို့၊ စာနာထောက်ထားတတ်ဖို့၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးပြီး ဥပဒေ အထက်မှာ ဘယ်သူမှမရှိဖို့၊ လူသားအရင်းအမြစ်တွေကို စနစ်တကျ အသုံးချတတ်ဖို့၊ ငြိမ်းချမ်းစွာအတူ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ဖို့ ပညာရေးအစီအစဉ်တွေက ကူညီပံ့ပိုးနိုင်ပါတယ်။
မီဒီယာတွေကလည်း ဘက်မလိုက်ဘဲ မီဒီယာကျင့်ဝတ်နဲ့ အညီ ကူညီပံ့ပိုး နိုင်ပါတယ်။
သုတေသီတွေကလည်း မိမိရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို အလွဲသုံးစား မလုပ်ဘဲ အမြင်မတူတာတွေကို တင်ပြခြင်း၊ ပိုင်းခြားဝေဖန်ခြင်း၊ တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်းတို့ကို ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဘက်တည်းကို ဦးစားပေး ဖော်ပြတာမျိုး၊ ထိန်ချန်မှုမျိုး မပြုအပ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ ဆန်းစစ်လေ့လာမှုပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေး တိုးတက်စေဖို့နဲ့ ပြဿနာ ဖြေရှင်းမှုဆိုင်ရာ အရည်အသွေး တိုးတက်စေဖို့ အရှိတရားကို လက်ခံရဲဖို့ ကြိုးစားမှသာ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို တည်ထောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၂ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၉)ရက် နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ တော်ဝင်နှင်းဆီ၊ သီရိခန်းမ၌ မြန်မာမွတ်စလင်မ်ကွန်ရက်မှ ပြုလုပ်သော အီဒ်မိတ်ဆုံ၌ ဒေါက်တာမြင့်သိန်း (ငြိမ်းချမ်းလုလင်)မှ ပြောကြားခဲ့သော အဖွင့်အမှာစကား
လေးစားအပ်ပါသော ညီအစ်ကိုမောင်နှမ အပေါင်းတို့ခင်ဗျား
မြန်မာမွတ်စလင်မ်ကွန်ရက်မှ စီစဉ်ပြုလုပ်တဲ့ အီဒ်မိတ်ဆုံ (Eid Gathering)ကို အခုလို ညီနောင်စိတ်ဓါတ်နဲ့ လာရောက်အားပေးကြသူ အားလုံးကို ချစ်ကြည်နွေးထွေးစွာ နုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။
(၁) ဗမာမွတ်စလင်မ် (ပသီ၊ မြေဒူး၊ ဇေရ်ဘာဒီ အပါအဝင်)
(၂) ရခိုင်မွတ်စလင်မ် (ကမန် အပါအဝင်)
(၄) ပသျှူး နဲ့
(၅) ကသည်းမွတ်စလင်မ်တို့ ပါဝင်ကြပါတယ်။
မြန်မာမွတ်စလင်မ် လူ့အစုအဝေးထဲမှာ မပါဘဲ မိမိတို့ရဲ့ ဘိုးဘွားမျိုးနွယ်ကို ထိန်းသိမ်းကြတဲ့ စူရတီ၊ မေမန်၊ ဘင်္ဂါလီ၊ နရ်စာပူရီ၊ ပထန် စတဲ့ လူမျိုးစုတွေလည်း သီးခြားရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကချင်တစ်ဦးဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာကို လက်ခံ လိုက်ရင် ကချင်မွတ်စလင်မ် လို့ခေါ်ပင်မယ့် လူမျိုးအဖြစ် ကချင်အဖြစ်သာ ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ မြန်မာမွတ်စလင်မ် လူ့အစုအဝေးထဲမှာ ရှိနေကြတဲ့ လူမျိုးစုတွေ၊ ရှေ့နေ၊ မီဒီယာ၊ လူငယ်၊ အမျိုးသမီး၊ ဆေးပညာ၊ ကုန်သည်၊ ပညာရှင် စတဲ့ နယ်ပယ်အသီးသီးက ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ကွန်ရက်ကို ဆိုလိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်နိုင်ဘို့ အတွက် အမြုတေ စုစည်းမှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် သန်းပေါင်း ၁၅၀၀ကျော် ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံ ရှိနေပါတယ်။ အစ္စလာမ့်ပြက္ခဒိန်အရ နဝမမြောက်လ (ရမဒွါန်လ)မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ကျား/မ မရွေး၊ လူမျိုးမရွေး၊ တစ်လတာ ဥပုသ် တည်ဆောက်ကြရပါတယ်။ ဥပုသ်လကုန်ရင် ဝါကျွတ်အီဒ်ပွဲတော် ကျင်းပ ကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဩဂုတ်လ ၂၀ရက်နေ့က ဝါကျွတ်အီဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့တော့ အထိမ်းအမှတ် အီဒ်မိတ်ဆုံ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စလာမ်ဥပုသ်ကာလတစ်လလုံး ရုံးပိတ်ရက်မသတ်မှတ်ပါဘူး။ ပုံမှန် အလုပ်လုပ်ရင်း ဥပုသ်ယူထားမှ ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မနက် အာရုံဦးကနေ ညနေ နေဝင်ချိန်အတွင်း ရေတောင် မသောက်ရပါဘူး။ ဘယ်သူမှ မမြင်အောင် ရေသောက်လို့ရပေမယ့် အနှိုင်းမဲ့ကိုးကွယ်ရာ အရှင်သိမြင်တော်မူတယ် ဆိုတဲ့အသိနဲ့ ဥပုသ်သည်တွေ မသောက်ကြပါဘူး။ ရေကိုတောင်မသောက်ဘဲ စောင့်ထိန်းနိုင်တဲ့အတွက် စိတ်စွမ်းရည်မြင့်တက်လာပါတယ်။ ဥပုသ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က မှန်သောအယူ၊ မှန်သောအကျင့် ရရှိရေးပါ။ ဒါကြောင့် ဝါကျွတ်ပြီဆိုရင် မွတ်စလင်မ်တွေဟာ ကိုယ်ကျင့်တရား လေ့ကျင့်ခန်း တစ်လလေ့ကျင့်ပြီးလို့ ဘဝတိုက်ပွဲမှာ ပြစ်မှုရှောင်ခြင်း၊ ကောင်းမှုပြုခြင်း ဆိုတဲ့ တရားနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဘို့ အသင့်အနေအထား ရောက်ရှိနေပါတယ်။
ဒီအခမ်းအနားဟာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာမွတ်စလင်မ် လူ့အစုအဝေးဟာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အသင့်ရှိနေတယ် ဆိုတာကို တစ်မြေတည်းနေ တစ်ရေးတည်းသောက် ညီနောင်များကို ရိုးသားစွာ ပြသတဲ့ ပြယုဂ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာမွတ်စလင်မ် လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ ပုဂံခေတ်ကစပြီး သမိုင်းကြောင်းအရ တစ်စစခိုင်မာစွာ ဖြစ်တည်လာခဲ့ကြပြီး၊ ၁၈၂၄ခုနှစ် မတိုင်မီ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ပထမစစ်ပွဲ မတိုင်မီ ကတည်းက မြန်မာပြည်မှာ အခြေစိုက် နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး တိုင်းပြည်အပေါ်မှာလည်း သစ္စာရှိစွာ တာဝန်ထမ်းခဲ့ကြတဲ့ အတွက်လည်း ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဂုဏ်ပြုခံခဲ့ကြရပါတယ်။
ဘိုးတော်ဘုရား လက်ထက်မှာ ရခိုင်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် ပြည်မအပါအဝင် ရခိုင်ဒေသမှာရှိတဲ့ မြန်မာမွတ်စလင်မ် လူ့အစုအဝေးတွေကို ပသီ လို့သတ်မှတ်ပြီး ဓမ္မသတ်မှူးချုပ်တစ်ဦး ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၄၈ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဖြစ်မှု အက်ဥပဒေအရဖြစ်စေ၊ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေအရဖြစ်စေ၊ ၁၈၂၄ ခုနှစ် မတိုင်မီ မြန်မာပြည်မှာ အခြေစိုက်နေထိုင်တဲ့ လူ့အစုအဝေးတွေဟာ တိုင်းရင်းသားလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက် အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ မြန်မာမွတ်စလင်မ် လူ့အစုအဝေး တွေဟာလည်း တိုင်းရင်းသားစာရင်းထဲမှာ အလိုအလျောက် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဗြိတိသျှကိုလိုနီဘဝမှာ မြန်မာပြည်က ဗြိတိသျှပိုင် အိန္ဒိယရဲ့ ပြည်နယ်တစ်ခုဘဝရောက်ခဲ့ပြီး အိန္ဒိယမှလူများ မြန်မာပြည်နဲ့ ကူးလူး၊ ဆက်ဆံမှုရှိလာခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ-အိန္ဒိယ ကပြားများလည်း ပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လွတ်လပ်ရေးယူခါနီး မြန်မာနိုင်ငံသား ဘယ်သူလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတ်မှတ်ရာမှာ အောင်ဆန်း-အက်တလီ စာချုပ်အရဖြစ်စေ၊ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရဖြစ်စေ၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန္နဝါရီ (၄)ရက် မတိုင်ခင် ၁၀နှစ် အတွင်း ၈နှစ်ဆက်တိုက် မြန်မာပြည်နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာ နေထိုင်ခဲ့သူတိုင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လို့ သက်မှတ်ထားတဲ့အတွက် မြန်မာမွတ်စလင်မ် လူ့အစုအဝေးနဲ့ မြန်မာ-အိန္ဒိယ ကပြားတွေဟာ နိုင်ငံသား စစ်စစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဥပဒေအရ ခွဲခြားဆက်မှု လုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သာမန်ရာထူးတွေ မပြောနဲ့၊ ဝန်ကြီး၊ အမတ်နေရာတွေတောင် ရခဲ့ကြပါတယ်။ တိုင်းပြည်အပေါ် သစ္စာရှိစွာလည်း တာဝန်ထမ်းရွက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာ့သမိုင်းကိုကြည့်ရင် ဦးဘရှင်(သံတွဲ)၊ ဦးကျော်ခင်၊ ဦးထွန်းစိန်၊ ဦးရာရှစ်စတဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ပင်လုံစာချုပ်ကို အောင်မြင်စွာ ချုပ်ဆိုနိုင်ဘို့ ညှိနှိုင်းခဲ့တဲ့ ဦးဖေခင်နဲ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင် အာဇာနည်ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်တို့ ပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။
This entry was posted on September 13, 2012 at 4:13 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.